यस कारण भत्कियो सहमति, 'चिटिङ' गरेर विधेयक पारित | EduKhabar
काठमाडौं २९ साउन /चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न माग राखेर अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको समझदारी संसदीय समितिले पालना नगरेपछि समस्या झन् जटिल बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा. केसीका केही माग थप समेट्ने गरी मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको थियो।
बालुवाटारमा नयाँ कलेजले सम्बन्धन पाउने प्रमुख आधार बनाउँदा अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्षको सट्टा दुई वर्ष राख्ने सहमति जुटेको थियो। तर त्यो गणना 'स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति पाएको' मितिबाट हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने महŒवपूर्ण बुँदा नै विधेयक पारित गर्ने क्रममा हटाइयोे। स्वास्थ्यबाट सञ्चालन अनुमति पाएको अवधिको सट्टामा 'अस्पतालले प्रचलित कानुनबमोजिम स्वास्थ्य सेवा कर तिरेको मितिबाट सो अवधि गणना थालिनेछ' भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ। पारित व्यवस्थाले स्वास्थ्यले तोकेका पूर्वाधार पूरा नगरेका अस्पताललाई समेत सम्बन्धनका लागि योग्य बनाउँछ।
विज्ञका अनुसार चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अस्पताल पूर्ण रूपमा चलेको हुनुपर्नेलाई पहिलो सर्तका रुपमा हेरिन्छ। अब नयाँ सम्बन्धन दिँदा कुनै पनि हालतमा गुणस्तरमा सम्झौता नहोस् भन्नकै लागि कलेजका शिक्षण अस्पतालको पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिन यस्तो बुँदा राख्ने सहमति भएको थियो। स्वीकृति पाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्तरअनुसार अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने मापदण्ड २०६९ को संशोधन २०७२ अनुसारका पूर्वाधार हुनुपर्छ।
तर अधिकांश मेडिकल कलेजले न ती पूर्वाधार पूरा गरेका छन् न मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति नै लिएका छन्। यो सर्त मान्दा अझै थप केही वर्ष सम्बन्धन पाउन कलेज योग्य नहुने अवस्था देखेपछि सञ्चालक समेत रहेका सांसदको दबाबमा यो बुँदा प्रतिवेदनमै हटाइएको समितिअन्तर्गतको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए। माथेमा कार्यदललाई प्रस्तावनामै उल्लेख गर्ने विषयमा समेत बालुवाटारमा सहमति भएको थियो। त्यसैगरी विधेयकको प्रस्तावनामै माथेमा प्रतिवेदनका रूपमा चिनिने 'चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनको भावना तथा मर्मलाई दृष्टिगत गर्दै' भन्ने वाक्यांश राख्ने विषयमा समितिभित्रै विवाद उत्पन्न भएको छ।
बालुवाटार सहमतिका आधारमा प्रस्तावनामा कार्यदलको प्रतिवेदनको नाम राख्दा अधिकांश नीतिनियम कानुन बन्दा त्यसको भावनालाई ख्याल गरिने आशा डा. केसी पक्षको थियो। यो विषयमा समेत विवाद हुँदा प्रतिवेदनको मर्मसमेत स्वीकार्न नखोजेको स्पष्ट भएको आरोप केसी पक्षको छ। केसीले माथेमा प्रतिवेदनको भावनाविरीत सहमति नगर्न वार्ता टोलीलाई निर्देशन दिएका छन्। 'हामीले विद्यार्थी र दूरदराजका नागरिकका लागि लडेका हौं, त्यही कुरामा सम्झौता हुनेगरी अनशन तोडिन्न,' केसीले मास्कभित्रैबाट भने, 'बरु मर्न तयार छु, विद्यार्थीमुखी बुँदामा सम्झौता हुन्न'।
सुरुदेखि नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकमार्फत उपत्यकामा नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन बन्दै गर्नुपर्ने केसीको माग हो। माथेमा प्रतिवेदनको मर्म पनि यही हो। तर यो व्यवस्था राख्दा प्रमुख दुई दल एमाले र माओवादीले ऐन नै ल्याउन नदिने अवस्था देखिएपछि विभिन्न छलफलका क्रममा नयाँ कलेज आउन सहज पनि नहुने र पूरै सम्बन्धन पनि बन्द नगर्नेगरी सहमति खोजिएको थियो।
सहमति जुटाउन माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा खटेका थिए। वार्ता टोली, संसदीय समितिका सदस्यसहित बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्म छलफल भएपछि सहमतिको खाका तयार पारेर शुक्रबार बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो। अबेरसम्मको सो बैठकमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ, पूर्वस्वाथ्यमन्त्री थापा, महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा सामाज कल्याण समितिका सदस्य जीवन परियार र धनीराम पौडेल उपस्थित थिए। सोही आधारमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा अघिल्लो दिन खाका तयार पार्ने व्यक्तिसहित समिति सभापति रञ्जु झा समेतलाई बोलाएका थिए। सो बैठकमा भएको सहमति सुनाइएपछि त्यसमा डा. केसी 'कन्भिन्स' भएका थिए।
केसी सहमत भएपछि सोहीअनुसार शुक्रबार तीन बजे विधेयक पारित गर्ने र सरकारी वार्ताटोलीले त्रिविसँग सम्बन्धित बुँदालाई तत्काल टुंग्याएर सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको थियो। तर सहमति अनुसार न संसदीय समितिले विधेयक पारित गरिदियो न सरकारी वार्ताटोलीले सम्झौताका लागि अन्य माग पूरा गराएर मस्यौदा बनायो।
विधेयक पारित हुँदा महŒवपूर्ण बुँदा नै हटाइयो। वार्तामा पनि सरकारी टोली पुरानै ढंगले बिनातयारी आएको थाहा पाएपछि डा. केसीले सरकार संवेदशील नभएको र संसद्मा अझै मेडिकल माफिया नै हाबी भएको भन्दै आफूले अनशन नछाड्ने घोषणा गरे र आफ्नो वार्ताटोलीलाई फिर्ता बोलाए। तीन दिनको प्रयास एकाएक शून्यमा झर्‍यो।
सम्बन्धन पूरै बन्द नगर्ने तर सम्बन्धनको प्रावधान व्यवस्था कडा बनाउने गरी सहमति जुटेको थियो। तर त्यसमा पनि चलखेल भएपछि फेरि उपत्यकामा नयाँ कलेज बन्दै गर्नेगरी विधेयक समितिबाट फिर्ता गरेरै भए पनि प्रावधान थप्ने र मनमोहन सरकारले किनिदिने विषयमै नयाँ बहस सुरु भएको छ।
मनमोहन किन्न सरकार तयार छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपत्यकामा सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको मनमोहन मेडिकल कलेज किन्न तयार तयार रहेको बताएका छन्। डा.केसीको जीवनरक्षा र अनशन अन्त्यका लागि मन्त्री, पार्टी नेतासहित नागरिक अगुवासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले पार्टी र सञ्चालक तयार भए सरकार सञ्चालकको लागत उठ्ने गरी किनिदिन तयार भएको बताएका हुन्।
देउवाले अपराह्न उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापासँग डा. केसीको टुंग्याउने विषयमा छलफल गरेका थिए। शुक्रबारको निर्णयअनुसार सहमति हुन नसकेपछि देउवाले श्रेष्ठ र थापासँग परामर्श गरेका थिए। सोही क्रममा जीवनरक्षाका लागि ध्यानाकर्षण गराउन नागरिक अगुवा र डा.केसीका तर्फबाट वार्ताटोलीमा रहेका चिकित्सकहरू बालुवाटार पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नागरिक अगुवाहरू निलाम्बर आचार्य, केदारभक्त माथेमा, चरण प्रसाई, सुबोधराज प्याकुरेल, कनक दीक्षित, सुरेन्द्र भण्डारीसहित, डा.जीवन क्षेत्री, डा.अभिशेक सिंह र डा.सुमन आचार्य गएका थिए। 'तपार्इंहरु ओली (केपी) र पाण्डे (राजेन्द्र) लाई मनाइदिनुस्, म तुरुन्तै किनिदिन्छु,' देउवाले भने। देउवाले नागरिक अगुवासँग सरकारले यसअघि मनमोहन किन्ने निर्णय गरिसकेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले डा.केसीमा मागबारे आफूले अर्कै सोचेको बताए। 'यो निकै महŒवपूर्ण रहेछ, उहाँको जीवनरक्षा पनि महŒवपूर्ण छ,' देउवालाई उद्धृत गर्दै एक नागरिक अगुवाले भने, 'मनमोहन किनिदिउँ्क र उपत्यकामा नयाँलाई सम्बन्धन दिन बन्द गरिदिऊँ।'
पूर्वमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री देउवा मनमोहन किनेर विधेयकलाई मिलाएर माथेमा प्रतिवेदनको भावनाअनुसार नै ल्याउन तत्पर भएको बताए। बैठकमा मनमोहन बेच्न तयार भएर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भइसकेको सन्दर्भमा कसरी छुटेका कुरा थप्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। देउवाले शुक्रबार र गत २० गते पनि विभिन्न मन्त्री, संसदीय समितिका सदस्य, वार्ता टोली र अन्य सरोकारवालासहित बैठक राखेर डा. केसीका माग सम्बोधनको पहल गरेका थिए।
डा. केसीको आग्रहमा संघले फिर्ता लियो हडताल
डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि दबाब दिन देशभर स्वास्थ्य सेवा हडतालमा उत्रिएका चिकित्सकहरू शनिबार देशभर बाढीपहिरोले विपत्ति निम्त्याएपछि काममा फर्केका छन्।
जीवनरक्षाका लागि भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले आकस्किमबाहेकका सेवा तत्काल फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्। बाढीपहिरोको खबर सुनेपछि डा. केसीले संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेललाई टेलिफोन गरेर बन्द फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। दबाब दिनका लागि आवासीय चिकित्सकहरूले राजधानीका प्रमुख अस्पतालमा जारी सेवा बहिष्कार भने यथावत् राखेका छन्।
केसीको समथर्नमा प्रदर्शन
डा.केसीको जीवनरक्षाका लागि आमसर्वसाधारण एवं विभिन्न पेसाकर्मी र नागरिकले प्रदर्शन गरेका छन्। डा. केसी सोलिडाइरेटीको आह्वानमा शनिबार मध्याह्न माइतीघरबाट सुरु भएको र्‍याली बानेश्वरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो।
र्‍यालीमा डाक्टर, विद्यार्थी, विभिन्न पेसाकर्मी, कलाकारलगायत सहभागी थिए। सहभागीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा चलखेल गर्ने सांसद, वार्ताप्रति असंवेदनशील सरकारसहित प्रमुख दलविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।
र्‍यालीपछि आयोजित कोणसभामा सम्बोधन गर्दै अधिवक्ता ओम अर्यालले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका माफियालाई पराजित गर्न कडा आन्दोलन आवश्यक रहेको आंैल्याए।
सभामा नेता सुरेन्द्र चौधरी, चलचित्रकर्मी निश्चल बस्नेत, डा.अभिशेक सिंहलगायतले सम्बोधन गरेका थिए।
मुटु अचानक बन्द हुन सक्ने, भेन्टिलेटर तयारी
२० दिन देखि अनशन बसिरहेका डा. केसीको स्वास्थ्यमा आउन सक्ने जोखिम हेरेर अनशनकक्षसँगै भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। अस्पताल प्रशासन तथा उपचार टोलीले भेन्टिलटेर र अचानक मुटु बन्द भएमा चलाउन सघाउने मेसिन 'डिसी सक' सहित चलाउन जान्ने व्यक्तिको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
शनिबार दिनभर अत्यधिक छाती दुखेपछि डा. केसी मलिन अनुहार पारेर खुट्टा खुम्च्यार सुतेका थिए। उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार डा. केसीलाई कोल्टे फकर्िंदा असह्य पीडा भएको र हिक्कहिक्कसमेत दोहोरिएको थियो।
केही समय अक्सिजन मास्क निकाल्दासमेत घटेर ७० प्रतिशतसम्म झर्न थालेको छ। जुन सामान्य अवस्थामा ९५ भन्दा बढी हुनुपर्छ। रगतमा निरन्तर इलेक्टोलाइड घटिरहेका कारण मुटु अचानक बन्द हुने जोखिम बढेको चिकित्सकले बताएका छन्।